राज्यले आँखा खोले पाँच बर्षमा कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउँछु – YesKathmandu.com
बनाएर देखाउँछु नेपाली राजनीतिका आशलाग्दा अनुहार हुन् एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य यमलाल कँडेल । सदियौदेखि राज्यबाट उपेक्षा गरिएको कर्णाली अर्थात प्रदेश नम्वर ६ लाई आत्मनिर्भर र सम्पन्न शाली बनाउन उनले पाँच योजना अघि सारेका छन् । आगमी बजेटमा समेट्नै पर्ने उनका के छन् पाँच महत्वकाँक्षी योजनाहरु ?
सदियौदेखि पछि परेको कर्णाली अर्थात प्रदेश नम्वर ६ का मुल समस्या के देख्नुहुन्छ ?
नयाँ संविधान जारी भएपछि कर्णालीका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई जिल्ला मिलाएर प्रदेश नम्वर ६ बनेको छ । मानव सुचकांकलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्वर ६ अत्यन्त निराशाजनक अबस्थामा छ । यही प्रदेशका दुई जिल्ला डोल्पामा र हुम्लामा अझै यातायातको सुविधा पुग्न सकेको छैन । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिब्यक्ति आय हेर्ने हो भने अन्य प्रदेशका तुलनामा निकै कम छ । प्रदेश नम्वर ६ का यी मुल समस्या हुन् ।
प्रदेश नम्वर ६ को निराशाजनक अवस्थालाई सुधार गर्न आगमी बजेटले के कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ?
मानव सुचकांकमा हामी पछि परेपनि प्राकृतिक सम्पदाको हिसावले हामी धेरै धनी छौ । प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, प्राकृतिक सुन्दरताले यो प्रदेश भरीपूर्ण छ । यसको विकासमा आगमी बजेट आकर्षित हुनु पर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल बनाउने, मेडिकल कलेज खोल्ने जस्ता कुरा समेटिएका छन् । ति पुरा हुन्छन हुँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
तर प्रदेश नम्वर ६ को विकासका लागि आगमी बजेटको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमै हुनु पर्दछ । डोल्पा र हुम्लामा सडक पुरयाउनु पर्दछ । कर्णाली राजमार्ग वान ओए छ, त्यसको विस्तार गर्नु पर्दछ । जडीबुटीका लागि यो प्रदेश निकै सम्पन्नशाली छ । मैले अर्थ र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेर जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्न माग गरेको छु । आगमी बजेटमा यसले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । पर्यटन विकासका लागि रारालाई गन्तब्य बनाएर अगाडी बढ्नु पर्दछ । रारा गन्तब्य बनाएर अन्य पर्यटकीय स्थलको विकास गर्न जरुरी छ ।
यस प्रदेश भित्रको नलसिंह गाड लजबिद्युत आयोजनालाई जन सहभागितामा अगाडी बढाउन हामीले माग गरेका छौ । सवै राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले पहल गर्न जरुरी छ र जनसहभागितामा नलसिंहगाड आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी कर्णाली स्वाथ्य बिज्ञान प्रतिस्ठान र मध्यपश्चिम बिश्वबिद्यालयका लागि पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रदेश नम्वर ६ का यी समस्या सामधानका लागि यहाँको भूमिका के रहन्छ र आगमी बजेटमा कार्यक्रम पार्न यहाँले के पलह गर्नु भएको छ ?
हाम्रो मुल चुनौति मानव सुचकांकको निराशाजनक अवस्थालाई हटाउनु हो । सरकारले सदियौदेखि पछि पारिएको कर्णाली जुन प्रदेश नम्वर ६ मा छ त्यसका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । पर्यटन विकास, जनसहभागितामा नलसिंहगाड जलविद्युत परियोजना, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, सडक सञ्जाल भए हामी आत्मनिर्भर हुन्छौ । यसका लागि मैले आफ्नो तह र मेरो पार्टीको तर्फबाट निरन्तर पहल गरिरहेको छु । अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीहरुलाई भेटेर प्रदेशका समस्याहरु राखे । उहाँले आगमी बजेटमा हाम्रा समस्यालाई प्राथमिकताका साथ राख्ने बचन पनि दिनु भएको छ ।
प्रदेश नम्वर ६ मा राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था कस्तो छ ?
राजनीतिकरुपमा मतमतान्तर भएपनि अन्य प्रदेशका सवै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिने क्षमता राख्दछन् । विडम्वना त्यो थिति अझै हाम्रोमा बसेको छैन । एकले गरेको राम्रो काम अर्काेले विरोध गर्नै पर्ने संस्कृति जस्तो बनेको छ । यहाँ मुलतः एमाले, कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै बाहुल्यता छ । यी तीन दलका हामी नेताहरु एक ठाउँमा अहिलेसम्म उभिन सकेका छैनौ । अब हामीलाई अलग अलग भएर विकास निर्माणमा अवरोध पुराउने सुविधा र छुट छैन । यसका लागि सवै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विकास निर्माणका सन्र्दभमा एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास हामीले थालेका छौ ।
सांस्कृतिकरुपमा पनि यो प्रदेश निकै धनी छ । नेपाली भाषाको उत्पति स्थल जुम्लाको सिंजा यसै प्रदेशमा पर्दछ । सांस्कृतिक विभिधता छ । त्यसको संरक्षण र विकास जरुरी छ ।
ओली तर्साउन बामदेवले खेले नयाँ कार्ड
यातायात व्यवसायी संघ/समितिहरु नविकरण नगर्ने प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषदमा